NGO Poland laga leeyahay ayaa badbaadiyay muhaajiriin Suuriyaan ah oo ka soo gudbay xadka Belarus - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka NGO Poland laga leeyahay ayaa badbaadiyay muhaajiriin Suuriyaan ah oo ka soo...
NGO, Polish ah ayaa badbaadiyey laba muhaajiriin Suuriyaan ah Axaddii hore, ka dib markii labadaa muhaajir oo walaalo ahaa ay ka soo gudbeen xadka Belarus oo ay ka gudaha usoo galeen dhulka Poland qiyaas dhan 24.85 mayl (40 kiiloomitir).
Kumanaan muhaajiriin ah ayaa u socdaalay dalka Belarusiya iyagoo rajo ka qaba inay u gudbaan Midowga Yurub, kaliya waxay is arkeen yagoo ku xaniban xadka, xiligan oo uu jiro qabow.
Dad la hadlay Reuters ayaa sheegay in walaalaha oo midkood lagu magacaabo Kader, oo jira 39 sano & Loas, oo jira 41, ay ka yimaadeen Xumus, ay intii ay lugaynayeen ku dhawaadeen miyir doorsoon iyagoo aad u daaley kuna dhowaaday inay hadli kari waayeen, markii dhakhaatiirtu ugu timi si ay u caawiyaan meel u dhow tuulada Topczykaly. Magaca labada walaalaha ah lama shaacin.
“Waxaan ka helnay kaynta laba nin oo ku jira, waxay ku sugan yihiin xaalad aad u xun,” ayay tiri Agata Kolodziej oo ka tirsan hay’ad samafal oo Polish ah oo lagu magacaabo Ocallenie Foundation.
Ambalaas ayaa soo qaaday ragaa oo afar maalmood ku sugnaa kaynta. Waxaana loo qaaday isbitaal si loogu daweeyo.
Sabtidii, meydka wiil dhalinyaro Suuriyaan ah ayaa laga helay kayn u dhow xudduudda u dhexeysa Poland iyo Belarus, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 11 tan iyo markii dhibaatada muhaajiriinta ay bilaabatay xagaagan, sida ay sheegeen kooxaha gargaarku.
Kumanaan muhaajiriin ah oo u badan bariga dhexe ayaa isku dayaya inay ka gudbaan xadka u dhexeeya Poland iyo Belarus.
Previous articleNISA oo kaalinta ugu weyn laga siiyay ka bixitaanka Amisom ee Soomaaliya.
Next articleXog-NISA oo qalab sirdoon iyo saanad ciidan ka heleysa Turkiga.